Abakhiqizi be-ZTE OLT | I-China ZTE OLT Factory & Abahlinzeki
I-GPON OLT Class B + C + C ++ sfp Optical Module iyahambisana neZTE Gpon OLT
I-ZTE SFP GPON OLT C + i-transceiver ebonakalayo yakhelwe ukusebenza ngokubambisana ne-GPON-type optical line Terminal efana ne-ZTE C300 C320. I-ZTE SFP GPON OLT C + ifakwe i-emitter esezingeni eliphakeme, futhi ivumela ukusebenza isikhathi eside ngaphandle kokulahlekelwa amandla emisebe isikhathi eside futhi ngenkathi ingavumeli inethiwekhi ukuthi icwile. IZTE SFP GPON OLT C + inikezela ngamatheminali amaklayenti we-ONU angadluli ku-128, kanti ubuchwepheshe be-EPON buvumela kuphela ama-terminals amaklayenti angama-64 ukuthi adlule.
I-Original FTTH ZTE GPON EPON OLT ZXA10C300 efana ne-Huawei MA5680T
Lapho ubhekene nezidingo ezikhulayo zebandwidth ephezulu nezinsizakalo zemidlalo eminingi, ama-opharetha kufanele enze ibhalansi phakathi komnotho nokukhishwa kwabantu abaningi. Ungashintsha kanjani kahle kusuka ku-FTTC, FTTB naku-FTTCab uye ku-FTTH kuyinselelo phambi kwama-telcos kulezi zinsuku. Ama-opharetha acabanga ukwakha inethiwekhi ye-PON eluhlaza, ubufakazi besikhathi esizayo futhi esindisa i-TCO.
I-ZXA10 C300, iplatifomu yokuqala yokuthola amandla okufinyelela okuzayo emhlabeni, ithuthukiswa ngokukhishwa kokufinyeleleka kokukhanya okukhulu kanye nomnotho engqondweni. Imisebenzi yayo enamandla nokusebenza okuphezulu kwenza ukukhishwa okukhulu kwe-FTTx kube lula kunanini ngaphambili.
ZTE C320 Original New Mini 8 amachweba angu-16 amachweba angu-32 amachweba e-AC DC Power GPON OLT
Njengoba izidingo zemisebenzi yezokuxhumana zikhula, izinsizakalo ezengeza inani (i-VAS) kufaka phakathi imidlalo yenethiwekhi ye-3D, ingqungquthela yevidiyo / ifoni, iVideo on Demand (VoD) ne-IPTV yizindlela ezisemqoka zabanikezeli bezinsizakalo zokunikezela ngezinsizakalo ezahlukile ukuheha ababhalisile abaningi, futhi bathole inzuzo ukukhula kwemali engenayo.
I-ZTE ZXA10 C320, usayizi omncane, i-full-service optical access convergent platform, inikeza i-QoS yenethiwekhi kanye nenethiwekhi ethembekile ukuhlangabezana nezidingo zokuqaliswa okuncane kwezinsizakalo ze-FTTx.
Ikhadi lezimbobo le-ZTE GPON i-GTGH 16 enamamojula agcwele we-C + C ++ 16 sfp we-C300 C320 GPON OLT
IGTGH yikhadi elibhalisile le-16-Port GPON elenzelwe ukusetshenziswa ne-ZXA10 C300 nemishini ye-ZXA10 C320.
Ukubekwa kwe-ZTE GTGH kwepulatifomu yenethiwekhi yesizukulwane esilandelayo yomthamo omkhulu we-xPON wokuqoqa ukufinyelela, i-HSI, i-VoIP, i-TDM yenethiwekhi yesizukulwane esilandelayo, i-IPTV, i-CATV, iselula 2 g / 3 g kanye nokuhlangana kokufinyelela kwe-WiFi kwalo lonke ibhizinisi nokuphathwa kokulawula, futhi unikeze i-QoS kanye nokuthembeka kwezokuphepha kwezokuphepha kwezinga lezokuxhumana.
Izici zomkhiqizo zinamandla amakhulu we-ZTE GTGH, amandla aphezulu, ukusebenza okuphezulu kanye nefulethi, Vumelana namandla amakhulu, ukuminyana okukhulu, ukwanelisa "umthamo omkhulu, ihhovisi elincane" izidingo zokuziphendukela kwenethiwekhi nokusetshenziswa, ukuthuthukisa amandla okufinyelela, ukuhambisana nezidingo ifulethi lenethiwekhi. Ibhodi yesikhombimsebenzisi esiphakeme kakhulu, inikezela ngesixazululo esikhulu nesisombululo sesimo sebanga elide lesicelo esikhethekile.
I-Original GPON Service Board 8 Izimbobo ze-GTGO ezine-SFP Module B + C + C ++ ye-C320 C300 OLT
I-ZTE PSU \_ PSU-AC 48V 30A Power Supply zte olt c320 isiguquli samandla
Uhlelo lwamandla e-EPS30-4815AF liguqula okokufaka okukodwa kwe-AC kube yimiphumela emibili ye-DC ukuze kusetshenziswe ukusatshalaliswa kwamandla kweDC. Ingaxhunyaniswa kusethi eyodwa yamabhethri futhi isebenzise imodyuli yayo yokuqapha ukuphatha amabhethri.
I-Sfp C ++, IHuawei Qsfp +, Transmitter Wangaphandle Transmitter, Optical Fibre Module, I-Xfp Transceiver, Intengo ye-Huawei Olt,